Weather in Bali in March ~ Journey-Assist - Fety tany Bali amin'ny volana martsa.
Pejy fandraisana » Eran-tany / Faritra » Asia » Indonezia » Bali » Toetr'andro sy Bali » Weather in Bali amin'ny volana martsa
Weather in Bali amin'ny volana martsa
Ny volana martsa no volana voalohany amin'ny lohataona ary ny volana voalohany dia maneho ny tsy faran'ny fiavian'ny orana any Bali. Ny endri-javatra amin'ity volana ity dia ny mitazona goavambe Fetin'ny fahalemen'ny taom-baovao Bali, na Nyepi.
Ny martsa dia marihina ihany koa amin'ny toetr'andro tsara kokoa (aorian'ny volana ririnina) ary avy ny orana amin'ny fotoana fohy (matetika amin'ny alina). Mandritra ny fitsangatsanganana lava manodidina ny nosy amin'ny voalohany dia tsy misy orana intsony, ary aorian'ny 20 km dia mety hisy ny fahavoazana latsaka orana.
Mbola be loatra ny mari-pana eo amin'ny antonony ary mitentina 33 ° amin'ny tolakandro. Ny mari-pana amin'ny alina dia mihena amin'ny 24 ° Celsius.
Ny mari-pana ny rano dia mari-pahaizana ambany kokoa noho ny volana febroary, saingy mijanona ho mahazo aina tsara amin'ny lomano sy average 28 °. Ny fako any amoron-dranomasina dia kely noho ny amin'ny ririnina, tafaverina any amin'ny ranomasina ny otuttsi, esorina amin'ny serivisy sosialy. Mikasika ny tsy fahatomombanana amin'ny volana martsa dia mbola feno rano ny rano noho ny fotoanan'ny orana mivatravatra. Ka tsy misy resaka resaka snorkeling sy fihinan-drano hafa mitaky rano madio.
Fanetren-tena any Bali ny volana martsa
Mbola avo 75% ny fanetrentena. Misy ny zavona any an-tendrombohitra sy ny Batura caldera. Amin'ny ankapobeny, matetika ny rahona dia ny rahona matetika. Ny masoandro dia aseho tsy mihoatra ny folo andro mandritra ny volana, ary ireo dia manakaiky kokoa ny volana aprily.
Varatra any Bali ny volana martsa
Ny orana amin'ny volana martsa any Bali dia mbola tranga tsy tapaka ary ny antontan'isa nandritra ny taona lasa dia manondro 20 andro orana amin'ny salanisa mandritra ny volana.
Mamonja ity ny rivotra ao an-dranomasina. nanjary azo tsinontsinoavina ny onjan-drano. Ary afaka mitsoka, manidina sekoly sy toerana filalaovana ho an'ireo vao manomboka ny miasa.